बुहारी बनेको ९ वर्षपछि पेट दुखेर अस्पताल जाँदा सपरिवार छक्क, चिकित्सकको समेत होस उड्यो ! – Khabaarpati
December 20, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on बुहारी बनेको ९ वर्षपछि पेट दुखेर अस्पताल जाँदा सपरिवार छक्क, चिकित्सकको समेत होस उड्यो !
ती महिलालाई मात्रै होइन, उनकी एक काकी र २८ वर्षकी बहिनीमा पनि यहि सिन्ड्रोम देखिएको छ । डाक्टर अनुपम भन्छन्, ‘जब हामीलाई यो सिन्ड्रोमबारे थाहा भयो तब हामीले उनको परिवारबारे पनि सोध्यौं । उनले उनका परिवारका अन्य दुई महिला पनि महिनावारी नभएको बताइन् । उनीहरुको पनि परीक्षण गर्दा यहि सिन्ड्रोम पाइयो तर उनीहरु पनि सामान्य जीवन बाँचिरहेका छन् । अब हामी उनीहरुको पेटमा पनि अण्डकोष छ छैन भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौं । यदि यस्तो भए, त्यो हामी निकालिदिनेछौं ता कि भविष्यमा क्यान्सरको खतरा नहोस् ।